Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles waxay ku samaysay Calaamadeedii Guusha IFTM Top Resa
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Seychelles oo ku taal IFTM Top Resa
Seychelles ayaa si muuqata uga qeybgashay carwadii ganacsi ee dalxiiska ee ugu horreysay tan iyo markii uu billowday COVID-19 ee Paris toddobaadkii hore bandhigga IF2021 Top Resa, oo ah carwada ugu weyn ee caalamiga ah ee ganacsiga Faransiiska oo u heellan dalxiiska.
Carwooyinka ganacsiga sida IFTM Top Resa, oo ku jira daabacaaddii 43 -aad, waa aalad qiimo u leh nooc kasta oo ganacsi oo ay ku jirto dalxiiska.
Waxay ahayd fursad weyn oo lagu soo bandhigo badeecadaha jasiiradaha ganacsiga safarka iyo saxaafadda.
Dhacdooyinka sida IFTM Top Resa waxay u oggolaaneysaa mid inuu abuuro tilmaamo iibin sidoo kale waa fursad isku xirnaan qiimo leh.
Bernadette Willemin, oo ah Agaasimaha Guud ee Waaxda Dalxiiska ee Suuqgeynta Meel-marinta ee Seychelles, oo hoggaaminayey wafdiga shanta xubnood ee jasiiradda u socday munaasabadda lagu qabtay Porte de Versailles ee caasimadda Faransiiska laga bilaabo Oktoobar 5, 2021, illaa Oktoobar 8, 2021. markay ku soo laabato jasiiradaha “IFTM Top Resa waa calaamad u noqoshada nolosha caadiga ah maaddaama ay dejinayso codka dib-u-bilaabidda warshadaha. Carwada ganacsiga waxay ahayd fursad weyn oo lagu soo bandhigo badeecadaha jasiiradaha ganacsiga socdaalka iyo saxaafadda oo la soo bandhigo waaya -aragnimada kala duwan ee loo soo bandhigay martida.
Carwooyinka ganacsiga sida IFTM Top Resa, oo ku jira daabacaaddii 43aad, waa aalad qiimo u leh nooc kasta oo ganacsi ah. Waxay u oggolaanaysaa mid inuu abuuro tilmaamaha iibka oo uu siiyo fursado uu ugu beddelo xiisaha hoggaamiye u qalma. Sidoo kale waa fursad isku xirnaan qiimo leh oo lala yeesho dadka iyo ganacsiyada ka socda warshadaha iyo in la abuuro wacyigelin ku saabsan ganacsigeenna iyo summaddeena.
Muddadii afarta maalmood ahayd waxaan fursad u helnay inaan isku xirno, ka wada hadalno oo isweydaarsano soo -jeedinnada la -hawlgalayaasheenna dariiqyada iyo siyaabaha aan u sii wadi karno kordhinta ganacsigeenna guud. ”
Ms. kor u qaadista jasiiradaha Seychelles. “Waxaan la kulannay dhammaan hawlwadeennadeenna dalxiiska ee ugu waaweyn, dhammaan duulimaadyada kala duwan ee u duulaya meeshii aan u soconnay - sidayaal ka yimid Yurub, Bariga Dhexe, kuwa Afrikaanka ah iyo ugu yaraan, diyaaradda qaranka Faransiiska oo isu diyaarineysa inay howlaheeda bilowdo dhammaadka tan bil. Waxaan wadahadallo la yeelannay Emirates, Etihad, Qatar Airways, Turkish Airlines, Kenya Airways, Ethiopian Airlines iyo dabcan Air France. Saxaafadda iyo warbaahintu waxay sidoo kale ku sugnaayeen kulanka dhowr kulan iyo wareysiyo ay ka mid yihiin mid leh telefishanka caanka ah ee TF1, ”ayay tiri Marwo Willemin.
Ganacsiga socdaalka maxalliga ah waxaa bandhigga ku matalayay wakiillada dibedda ee Adeegyada Socdaalka Creole, Safarka Mason, Berjaya Hotels Seychelles iyo Mango House Seychelles, iyo ku dhawaad ​​Blue Safari Seychelles iyo North Island. Marwo Willemin, oo ay wehelinayeen Madaxa Suuq -galka Dalxiiska Seychelles - France & Benelux oo fadhigiisu yahay Paris, Ms. Jennifer Dupuy, ayaa muujisay sida ay ugu qanacsan tahay natiijada ka soo baxday cadadka sanadkan ee carwada ganacsiga.
“Wada -hawlgalayaashii goobta joogay dhammaantood waxay istaageen iyagoo taagan iyagoo qanacsan. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadcelinaynaa dhammaantood waxaanan rajeyneynaa inaan aragno iskaashi iyo iskaashi dheeri ah oo ka socda warshadaha dalxiiska ee Seychelles si loo sii wado kobcinta suuqa, taasoo durba muujineysa calaamad wanaagsan oo horumar marka loo eego tirooyinka imaanshaha. ”
Isagoo xaqiijinaya qiimeyntan, wakiilka Safarka Mason Olivier Larue ayaa yiri, “Waan ku faraxnay inaan raacno Dalxiiska Seychelles dhacdadan ugu horreysa ee jir ahaaneed ee caalamiga ah oo ay weheliyaan la -hawlgalayaasha kale ee ganacsiga iyo in si sharaf leh kor loogu qaado badeecadeena iyo meesha loo socdo guud ahaan. Waxay ahayd wax aad u dhiirri -gelin ah in la arko ka -qaybgal aad u sarreeya bilowgii bandhigga iyo xamaasadda iyo dabeecadda togan ee wada -hawlgalayaasha ganacsiga guud ahaan. ”